नेताले हुनुपर्ने यस्तो हो
गाउँपालिकामा दुःख के छ ? कतिसम्मको दुःख हुन्छ । त्यसमा पनि गाउँले महिलाहरुको पीडा के के हुनसक्छन् ? खासगरी मेलापातभन्दा पनि पानीको दुःखले महिलाहरु कतिसम्म दुखित छन् ? यो प्रत्येक जनप्रतिनिधिले बुझ्नै, जान्नैपर्ने विषय हो । पानी गाउँमा मात्र होइन, सहरी इलाकामा पनि हाहाकारकै विषय हो । पानीको नबुझ्ने नेता के नेता ?
चुनाव जित्यो, नेता बन्यो गाउँसहर घुम्यो । हुने नहुने काम बोकेर हिड्यो, सपना बाँड्यो, जनताको आँखामा छारो हाल्यो, यही हो नेता हुनु भनेको ?
राक्सीराङ्, मकवानपुरको एउटा गाउँ । गाउँले महिलाहरुलाई सूचना गरियो कि एउटा स्कूलको भवन हस्तान्तरण गर्न नेताहरु आउँदैछन्, स्वागतका लागि आउनु । महिलाहरुले गोप्य बैठक बसे र निर्णय गरे– यही मौका हो, भोट दिएर जिताएका नेताहरुलाई सवक सिकाउने । उनीहरुले योजना बनाए ।
नेताहरु आए, भाषण गरे, सकूल हस्तान्तरण पनि भयो तर महिलाहरुले नेताहरुलाई डोको र गाग्री दिएर पानी ल्याउनैपर्छ भनेर दबाब दिए । नेताजीहरु यसरी डोकोमा गाग्री भाँडा बोकेर पानी लिन गए । बल्लतल्ल तिनले पानी त ल्याए, ल्याउपछि गाउँलेलाई प्रतिक्रिया दिए– हाम्रो आँखा खुल्यो ।
अहा, यो हो नि जनताको काम । जनताले भोट दिने हो, प्रतिनिधि छान्ने पनि हो । प्रतिनिधिले काम गर्दैनन्, जनताको कुरा सुन्दैनन्, भाषणमात्र गर्छन् भने तिनलाई यसैगरी सवक सिकाउने जिम्मा पनि जनताकै हो । जनताको चेतनाले जनप्रतिनिधि यसरी सही काम गर्न अग्रसर हुन्छन् । नेता भनेका जनताका मालिक होइनन्, तिनलाई जनसेवक बनाउने काम जनताको हो ।
हेटांडामा मात्र होइन, यो समाचारले यतिबेला देशैभरि चर्चा पाएको छ । चर्चा पाउनु पनि पर्छ । हजार, लाख, करोड, अर्वको भ्रष्टाचारका खबर आउँछन् । बलात्कार, हत्या, हिसा, लूटका खबर दिनदिनै समाचार बन्छन् । समाचार बन्नुपर्ने खबर नेताहरुले जनतासँगै डोको बोकेको खबर हो । जनताको पीडा बुझाउने र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छु भन्ने खबर हो । यो खबर देशैभरि फैलिनुपर्छ । यो खबरले नेता र जनता दुबैलाई संचेतन पर्छ ।
मकवानपुरको त्यो गाउँमा डोकोमा गाग्री बोकेर ठाडो उकालो चढ्न कति गाह्रो हुन्छ, यो बुझेका नेताहरुले काम थालिसके । यो हो विकासको पहिलो खुट्किलो । यसरी डोको बोक्नेहरु थिए– सांसद सन्तवहादुर चेपाङ, राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, वडा अध्यक्षहरु, कांग्रेसका मकवानपुर सभापति रघुरमल न्यौपाने, नेकपाका हस्तबहादुर मोक्तानहरु थिए , तिनले बचन दिए– हामी जनताको काम गर्छौं, चेत खुल्यो । धन्यवाद आमा समूह । देशैभरिका आमा, दिदीबहिनीले यस्तै शिक्षा आफ्ना नेतालाई दिउँ ।